Ibhethri le-iPhone 7 no-7 liyohlala isikhathi esingakanani? | Ngivela kwa-mac
Ibhethri le-iPhone 7 no-7 liyohlala isikhathi esingakanani?
Kufakiwe | | iPhone
Ngokubona ukuthi isihloko sanamuhla ngamabhethri, imijikelezo yokushaja ne-Apple Watch, ngithathe isinqumo sokuqeda usuku ngokuphawula ngemininingwane nge-iPhone 7 nenguqulo yayo enkulu. Sesivele sinamasonto ambalwa ukusuka enkulumweni eyisihluthulelo, yize kungekho lutho olusaziwa ngosuku oluqondile. Bangasethulela ngezinto eziningi noma basidumaze, njengoba benza ngoMashi. Kepha ngaphandle kokungabaza, omunye wamandla wedivayisi ehamba phambili kuzoba yibhethri.
I-iPhone 7 yethu izohlala isikhathi esingakanani ngaphandle kokuyikhokhisa? Yilokhu okumele sikulindele uma kubhekwa amahemuhemu nezindaba esizibonile ezinsukwini ezisanda kwedlula.
1 I-iPhone 7 izoziqhayisa ngebhethri
2 Nsuku zonke nge-iPhone ehlala isikhathi eside
I-iPhone 7 izoziqhayisa ngebhethri
Kungase kungabi okusha kakhulu uma ungashintshi indlela inkinobho yasekhaya esebenza ngayo noma ukuthi ibukeka kanjani, kepha bambalwa abangayishaya uma kukhulunywa ngamandla ebhetri. Namuhla sikhulume kakhulu ngamabhethri okuthiwa aputshukile we-Apple Watch 2. Nokho, lokhu kuzoba namandla athe xaxa angama-35% ngaphezulu. Kwashiwo okufanayo nge-iPhone, yize iphesenti lalingaphansi kancane. I-iPhone 7 kuthiwa ifika nebhethri engafika ku-15% ngaphezulu ngokomzimba, okungekuncane. Ake sibheke ngezansi ukuthi kungasho amahora amangaki okusetshenziswa futhi nokuthi kungahumushela kuliphi uma ulisebenzisa empilweni yethu yosuku nosuku.
Njengoba nginemodeli engu-4,7-intshi ye-iPhone 6 futhi lena enikeza izinkinga eziningi ngesikhathi, ngizoyisebenzisa njengesibonelo. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlanganiswa kuhlala isikhathi eside kakhulu. Kungakho ngincamela ukugxila ekukhulumeni ngomncane. Njengamanje i-Apple ithembisa ukufika emahoreni ayi-10 wokusetshenziswa okuqhubekayo. Ngithole ukuzwa phakathi kuka-7 no-8 ngokusetshenziswa okujwayelekile. Yebo kulokhu Sifaka u-15% kuyo, singabona ubude obuphakathi kwamahora ayisishiyagalombili no-8, noma i-10, kepha i-iPhone ayiphili ebhetri lomzimba kuphela.
Kumele kucatshangwe ukuthi ukusebenza kahle kohlelo olusebenzayo, imodi yokonga ibhethri kanye neprosesa kuthinta kakhulu isikhathi i-iPhone esebenzayo ezosebenza ngaso ngaphandle kokungena ngepulagi. Ngokuthuthuka esikubona ku-iOS 10 naku- i-iPhone 7 ibitholakala kalula kumahora ayi-10 yokusetshenziswa okuqhubekayo, futhi kungazama ukufinyelela ku-11. Lokho maqondana nemodeli ye-4-intshi. Ngokuphathelene nemodeli yokuhlanganisa, amahora we-7 wokusebenzisa okuqhubekayo angafinyelelwa.
Nsuku zonke nge-iPhone ehlala isikhathi eside
Hhayi kuphela ukumelana namanzi nokwethuka, kuzophinde futhi kube namandla kubhethri. Uma i-Apple ingeze ukushaja okusheshayo kanye neshaja engenantambo, umehluko kusuka ku-iPhone 6s kuye ku-7 ungaba nesihluku. Besingakhokhisa ukuhlanganiswa njalo ezinsukwini ezimbili, futhi omncane angasigcina usuku lonke esebenzisa ukungami.
Bathe lesi sizukulwane ngeke sibe namasu amasha noma simangaze ngezinguquko ezinkulu ekwakhiweni, kepha empeleni bazoguqula amabhande angemuva futhi bangaveza imibala emisha. Asidingi okuningi okwamanje, singahlala komunye unyaka ngomklamo wamanje ohlanzekile futhi omuhle. Njengamanje okubekwa phambili ukwenza ngcono ibhethri nokucaciswa, ukwenza i-iPhone 7 kube yidivayisi ekahle.
Ngiyazethemba kakhulu kulesi siginali futhi ngicabanga izokwazi ukudlula kude ukuthengisa okutholwe yi-iPhone 6s kanye no-6s plus. Ukube owedlule ubeyisizukulwane esihle, kulo nyaka kuzoba njalo kakhulu. Vumela i-Samsung ithuthumele, ngoba yize labo be-apula elilumayo bengeke bakwazi ukululama noma bathole isabelo esikhulu semakethe, bazobuyisa idumela labo elihle futhi bazosimangaza kahle nge-iPhone 7 ne-7 plus ephakeme kakhulu kunakho konke esikubonile ngaphambili.
Kulokhu kunezelwa isesekeli esimangazayo njenge-Apple Watch 2, esibonile kuyo izindaba eziningi namahlebezi. Konke kukhombisa ukuthi kulo nyaka i-Apple ngeke ize ivuselele ekwakhiweni kwayo, kepha izothuthukisa ibhethri lakho konke, okuyilokho abasebenzisi abafuna kakhulu kunkampani ene-apula elilonyiwe. Kuzoba yisihluthulelo esihle ngemikhiqizo emihle kakhulu, sithemba nje ukuthi ngeke ibambezeleke isikhathi eside kakhulu kunezinkinga zokukhiqiza. Ake sibheke ukuthi kukhona abakushoyo yini kuleli sonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPhone » Ibhethri le-iPhone 7 no-7 liyohlala isikhathi esingakanani?
UDaniel Santiago Muñoz Moreno kusho
okungelona iqiniso ukuthi isikhathi singamahora ayi-10, ngoba ngigcine kuphela amahora ama-5 ngidlala imidlalo elula.
Phendula uDaniel Santiago Muñoz Moreno
Ngine-iphone 7 futhi ihlala phakathi kwamahora ama-4 kuye kwangama-5 ngokusetshenziswa okujwayelekile.
Ungahlola kanjani i-imeyili entsha kusuka kuMeyili ngesinqamuleli sekhibhodi
Iris, umqondo wamarobhothi osuselwa ekwakhiweni kweMac G4